विकास निर्माणका कामको अन्तिम चरणमा टोखा « Bagmati Page
विकास निर्माणका कामको अन्तिम चरणमा टोखा
काठमाडौं । विकास निर्माणका कामलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ विभिन्न कामहरु तीब्र गतिमा गर्दै आएको टोखा-५ मा पुर्वाधार विकास निर्माणका काम अन्तिम चरमा पुगेका छन् ।
टोखा-५ का वडाध्यक्ष जगन्नाथ ढकालले हाल सम्म ९० प्रतिशत भन्दा बढि पुर्वाधार विकास निर्माणका काम गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनले श्री समाजको सडकको काम सम्पन्न भए पश्चात विकास निर्माणका कामले पुणर्ता पाउने जानकारी गराए । अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘पुर्वाधार विकास निर्माणमा सानासाना गोरेटो देखि सिडी सम्मका कामहरु तयार गरीसकेका छौं ।’
हाम्रो विकासको मोडल अन्य भन्दा अलिक फरक खालको छ । जसमा सडक बनाउँदा ढल, खानेपानी पाईप र विद्युतका पोलहरुको अवस्था के कस्तो छ ? लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र सडक बनाउन शुरु गर्छौ उनले बागमती पेजलाई भने ।
सडक बनाउनु अघि विद्युतको पहुँच छ कि छैन ? ढलको अवस्था कस्तो छ ? खानेपानीको पाईप लाईनको अवस्था के छ ? पाईप कति वर्ष अगाडी हालेको हो ? बस्ति अनुसार पुग्ने छ कि छैन ? त्यसले दीर्घकालिन रुपमा धान्छ कि धान्दैन ? लगायतका सम्पूणर् कुराहरुको सुक्ष्म अध्ययन पछि मात्र सडक पीच, ढलान तथा कालो पत्र गर्ने कामलाई अगाडी बढाउँछौं ।
फिल्टर सहितको खानेपानी घर-घरमा
प्रदेश सरकारको १ करोड ४८ लाख बराबरको बजेटमा फागुन सम्म टोखा-५ भित्रका सबै घरमा फिल्टर सहितको खानेपानी पुर्याउन लागि परेका छौं । अध्यक्ष ढकालले बागमती पेजसँग कुरा गर्दै भने केन्द्रीय सरकारको योजनामा बनेको शिबमन्दिर बोरिङले खानेपानीको निकै सहजता भएको छ । शिबमन्दिर बोरिङ नगरिएको भए हाल सिङ्गो धापासीमा खाने पानीको निकै समस्या हुन्थ्यो । टोखा-४, ५, ६ र ७ का धेरै नागरिकहरु यस बोरिङबाट लाभान्वित भएका छन्, यसमा हामी निकै सन्तुष्ट भएका छौं ।
हाल कल्कि नारायण पार्क निर्माणाधिन अवस्थामा छ । धापासी देवी पार्क बनाउने नयाँ योजना अगाडी बढाएका छौ । पानीघाटमा दुई परिवार बस्न मिल्ने दुइ तले क्रियापुत्री भवन निर्माणको काम सम्मपन्न भएको छ ।
बसुन्धारा चोकमा बिरेन्द्र बाटीकामा रहेको क्रियापुत्री भवनको मर्मत सम्भार गरिएको, सहरी स्वास्थ्य भवन निर्माणको काम ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सिद्धेश्वर मन्दिरमा ज्येष्ठ नागरीक भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ओम शान्तिको सभाहल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
वडाध्यक्ष ढकालले पूर्वाधार विकासमा बाटो, ढल, मंगाल, खानेपानी, सामुदायिक भवन तथा पार्कहरु लगायतका कामहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएका छन् ।